Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, Mini Wareegtada Rotary Rig - Dinghua
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee XZDH waa hareeraha qodista jihada jihada, mashiinada qodista ceelasha biyaha, gawaarida qodista wareega iyo qaybo badan oo mashiinada injineernimada ah. Iyagu waa tayada caadiga ah ee waddanku aqoonsan yahay.
Ruuxda ganacsi ee shirkadda: adag, hoos-u-dhulka, hore u marin, iyo hal-abuurnimo.
Himilada shirkadeed ee shirkadda: si loo sahamiyo tikniyoolajiyadda injineernimada loona bixiyo xalka dhismaha injineernimada adduunka iyo horumarka waara.
Ballanqaadka shirkadda weligiis: sumcadda marka hore, daacadnimada ku saleysan, macaamiisha ugu horreysa, adeegga heerka koowaad, amniga marka hore, dadka u janjeedha, tayada ugu horreysa, iyo saxnaanta u jiheysan.
Falsafadda adeegga ee shirkadda: xirfadle, u heellan, u heellan, oo feejignaan leh, si dadka isticmaala u sahlanaato.
Xuzhou Dinghua Dhismaha Makiinado Co., Ltd.
Xuzhou Dinghua Construction Makiinado Co., Ltd. (XZDH) waxaa la aasaasay sanadkii 2015. Waa shirkad wadaag ah oo saamiyadeeda leh maal-gashigeedu yahay 10 milyan yuan.
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 50,000 mitir murabac, oo ay ku jiraan 36,000 mitir murabac oo dhismayaal warshadeed ah. Waxaan ku qalabeysan nahay in ka badan 200 xarumo cusub oo casri ah.
Waxaan ku takhasusay soo saaridda ee dhismayaasha mashiinada injineernimada baaxad weyn, iyo awoodda wax soo saarka sanadlaha ah waa ku saabsan 20,000 tan. Waxaan u isticmaalnaa mashiinno teknolojiyad sare ah oo loogu talagalay CNC, alxanka, foojignaanta iyo kuleylka daaweynta habka wax soo saarka.
Xuzhou Dinghua Construction Makiinado Co., Ltd. waa mid ka mid ah kuwa ugu tartamaya uguna wanaagsan shirkadaha XCMG. Waxaan ku siinnaa qaybo farsamo XCMG, Caterpillar, Heli Forklift, Liugong, Lingong iyo shirkado kale oo caan ah oo ka shaqeeya mashiinada Shiinaha.
HDd rig, Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, mashiinka qodista ceelka, mashiinka qodista hdd,